हाइड पार्क, लन्डनमा एक शाही पार्क यात्रा समाचार
पार्कहरू शहरहरू सजाउँछन् र हिड्नको लागि राम्रो ठाउँ हो, ठाउँको ताल देख्न र हाम्रो पर्यटन यात्राको बखत आराम गर्नुहोस्। खुल्ला लन्डन त्यहाँ धेरै छन्, तर सबैभन्दा प्रसिद्ध मध्ये एक निस्सन्देह छ हाइड पार्क.
हाइड पार्क यो इतिहास र धेरै कार्यको साथ एक वास्तविक पार्क हो, त्यसैले यदि तपाईं यस गर्मीमा लन्डन भ्रमण गर्नुहुन्छ भने तपाईं यसलाई रमाउन सक्नुहुन्छ, यद्यपि हामी सधैं भन्छौं, सबै चीजहरू सहीसँग बुझ्नको लागि केही इतिहास जान्न सजिलो हुन्छ। आज, तपाईंसँग, लन्डनको हरियो स्टार हाइड पार्क।
1 हाइड पार्क, यसको इतिहास
2 हाइड पार्कमा के हेर्ने
हाइड पार्क, यसको इतिहास
एक समय थियो जब इ England्ल्याण्ड क्याथोलिक थियो, तर शासनको अधीनमा हेनरी आठौं त्यो सदाका लागि परिवर्तन भयो। यस राजाले पोपसँग सम्बन्ध तोडे, आफ्नो शक्तिको क्षेत्र छोडे र प्रक्रियामा सबै चर्चिक सम्पत्तिहरू छोडिए: अबी, हवेली, बगैंचा र अन्य।
यसैले, १1536 मा यस जफत कार्यक्रम को रूपरेखा भित्र मुकुट हाइडको हवेली र यसको जग्गा ओगट्यो जुन नर्मन आक्रमणबाट बेनेडिक्टिन भिक्षुहरूको हातमा थियो। जमिनहरू मृगहरू थिए र एक समयको लागि शिकार मैदान थिए तर समय बित्दै जाँदा यो खुला रहन थाल्यो १ 1637 मा यो लोकप्रिय प्रयोग पार्कको रूपमा खोलियो.
जर्ज दोस्रोको शासनकालमा, पहिलो डिजाइन पार्कमा बनाइएको थियो।e, ब्रान्डनबर्ग-bbs को कन्सोर्ट क्यारोलिनका लागि। यो काम १ 1733 मा समाप्त भयो तर तिनीहरू केवल थिएनन् किनकि पछि १ the औं शताब्दीको अन्ततिर सर्प तालहरू निर्माण गरियो र १ th औं शताब्दीमा लन्डन र बेलायती साम्राज्यको बृद्धिसँगै अन्य कामहरू पनि देखा पर्न थाले। ।
तब ग्रान्ड एन्ट्रेंस यसको आयोनिक स्तम्भहरू र क्यारिज आर्चसहित निर्माण गरियो, अगाडि meters। मिटरमा काँसा र फलामका ढोकाहरूसहित हनीसकल जस्ता राम्रा तरीकाले डिजाइन गरिएको थियो। यस प्रकार यो अ capital्ग्रेजी राजधानीका नागरिकहरूमा लोकप्रिय हुँदै गइरहेको थियो र त्यसबेलादेखि यो कहिल्यै चम्किनबाट रोकेको छैन।
हाइड पार्कमा के हेर्ने
यस पार्क मा छ वेल्स स्मारक को डायना, एक आधुनिक डिजाइन फव्वारा जसले झरनाको सट्टा धाराको नक्कल गर्दछ, र यसको उद्घाटन महारानी एलिजाबेथ द्वितीयले २०० 2004 मा गरेको हो। यसलाई अमेरिकी आर्किटेक्ट क्याथ्रिन गुस्ताफसनले डिजाईन गरेका थिए र two 545 design टुक्राहरू ग्रेनाइटको दुई किनारबाट बग्ने गोलाकार डिजाईन हो। शीर्षमा जुन साना तल्लो पोखरीमा खस्छ।
तपाईं पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नागिन ताल, एक कृत्रिम ताल जुन पार्कको दक्षिणी छेउमा छ र केन्सिington्टन बगैंचामा पुग्छ, जबकि त्यहाँ यसलाई लामो पानी भनिन्छ। यो रानी क्यारोलिना, पत्नीको आदेशमा निर्माण गरिएको थियो जुन हामीले १ George1730० मा जर्ज द्वितीयको बारेमा भन्यौं र आज यो पौडी खेल्ने र डुating्गाका लागि धेरै लोकप्रिय छ।
अर्को प्रसिद्ध साइट हो स्पिकरको कुना। यस कुना को लोकप्रियता केहि शताब्दीहरु को पुरानो हो र भेट्न को लागी एक लोकप्रिय स्थान हो। राजनीतिबारे छलफल गर्ने मानिसहरू यहाँ जम्मा हुने गर्थे र पुलिसले उनीहरूलाई सधै बाहिर तानिरहेको थियो, त्यसैले अन्ततः एउटा यस्तो ठाउँ सिर्जना गरियो कि मानिसहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक कुरा गर्न सक्दछन्। त्यसैले प्रत्येक आइतवार बक्समा उभिन्छ र राजनीतिक, धार्मिक वा जे पनिमा स्वतन्त्र रूपमा टिप्पणी गर्न सक्दछन्। बक्सको बारेमा कुरा यो हो किनभने यो भनिन्छ, अ soil्ग्रेजी माटोमा कुनै आलोचना हुनु हुँदैन।
बिग्रिएको प row्क्ति यो पार्कको दक्षिणमा अवस्थित छ र यसको लामो, साधारण फोहोर ट्रेल छ छ किलोमिटर लामो छ जुन आज दौडन र घोडसवारी गर्न प्रयोग गरिन्छ, तर जुन १ Willi औं शताब्दीमा राजा विलियम तृतीयले प्रयोग गरेको मार्ग थियो। यस्तो देखिन्छ कि राजालाई केन्सिingtonटन प्यालेसबाट सेन्ट जेम्स प्यालेससम्म हिँड्न सुरक्षित थिएन त्यसैले उनले देशको पहिलो सडक बत्ती बनाउन बाटोमा तेल बत्तीहरू जडान गरे। अन्त मा यो मार्ग du रोम सडेको प row्क्ति भएको हुँ।
El मार्बल आर्क यो स्पिकरको कुनामा नजिक छ। यो मूल रूपमा १ucking२1827 मा बकिham्घम दरबारको बाहिर निस्किने एकको रूपमा निर्माण गरिएको थियो तर १ present location१ मा यसको हालको स्थानमा सारियो। यो प्रख्यात जोन नेशले रोमको कन्स्टेन्टाइनको आर्कबाट प्रेरणा लिएर डिजाइन गरेका थिए। अर्को लोकप्रिय निर्माण हो अचिलिस मूर्ति, हाईड पार्कको सबैभन्दा ठूलो, त्यहाँ १ placed२२ मा वाटरलूमा नेपोलियनमा उसको विजयको लागि ड्यूक अफ वेलिंग्टनको सम्मानमा राखिएको थियो।
वास्तवमा, त्यस मूर्तिको पीतल फ्रान्सेली तोपहरूले विभिन्न युद्धमा कब्जा गरेको हो र रोमको पियाजा डेल क्विरिनालमा क्यास्टर र पोलक्सको मूर्तिहरूको डिजाइनले प्रेरित गरेको छ। आज यो केही हदसम्म जिज्ञासु मूर्ति हो किनकि यसले एउटा पाना राख्दछ जसले जननांगलाई ढाक्छ र त्यो अंग्रेजी प्युरिटानिज्मद्वारा राखिएको थियो जुन उनीहरू नग्न देख्दा स्तब्ध भए। पार्कमा अधिक मूर्तिहरू? त्यसोभए तपाईं जान सक्नुहुन्छ र भेट्न सक्नुहुन्छ //7 स्मारक जुन हालसालै २०० it को आतंककारी हमलाको शिकार भएका rec 2005 स्टिल स्तम्भहरूको साथ सम्झना गर्दछ।
त्यहाँ पनि छ सुधारकर्ता रूख२००१ मा एक कालो र सेतो मोजेकले सन् १2001 protests protests मा भएको प्रदर्शनमा बल्दै गरेको ओक रूखको साइटलाई चिन्हित गर्‍यो। अर्को स्मारकमा विलियम हेनरी हडसन, लेखक र प्रकृतिविद्, अर्को एकजना सेन्ट जर्ज र उनको ड्र्यागनलाई सम्झन्छन् र त्यहाँ आइसिसको मूर्ति पनि रहेको छ। तालको नजिकै अवस्थित तीन मिटर अग्लो। र हालसालै गुलाब बगैचा निर्माण गरिएको थियो जुन पार्कमा अद्वितीय छ किनकि यो साटो र color्गको नभएर हरियो ठाउँ हो।
El गुलाब बगैचा यो पार्कको दक्षिण पूर्व कुनामा अवस्थित छ र त्यहाँ एक पर्गोला र दुई फाउंटेनहरू छन् आर्टेमिस फाउंटेन And 1822० र बच्चा र डल्फिनको मूर्ति १ 1862२ बाट। र अन्तमा, यदि तपाईंलाई फोहोरहरू मनपर्दछ भने पार्कमा अझै एउटा अझै छ, यो लाइफ फन्टको आनन्द काँसाका मूर्तिहरू, चारवटा र चौडाईका बच्चाहरूका चार मूर्तिहरू सहित सजाइएको। यो १ 1963 inXNUMX मा थॉमस हक्सले - जोन्स द्वारा सिर्जना गरिएको थियो।
हाइड पार्कको बारेमा व्यावहारिक जानकारी
स्थान: केन्द्रीय लन्डन, वेस्टमिन्स्टर।
आकार: १138 हेक्टर
समय: बिहान5देखि १२ बजे सम्म खुल्ला।
कसरी पुग्ने: बसले लाइनहरू २,,, ,,2,,, १०, १,, १,, १,, १,, २२,,,,, 6, ,२,, 7,8, ,२, १ ,9, १10, २14 लिदै , 15 16 ०, 19१22 र 30 36। पिकाडाली लाइनमा ट्यूब द्वारा हाइड पार्क कुर्नर र नाइट्सब्रिजमा बन्द हुने वा केन्द्रीय लाइनमा मार्बल आर्च र क्वीन्सवेमा बन्द हुने।
आकार: १138 हेक्टर।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » लन्डन » हाइड पार्क, लन्डनमा एक शाही पार्क
इस्ला मá्गिका, सेभिलमा थिम पार्क